Su'aalaha La Weydiiyo | Future Madax Ball Co., Ltd.
Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
Waxaan nahay soo saaraha qaybaha waalka iyo dhoofinta, waxaan leenahay warshad noo gaar ah oo ku taal Oubei, Wenzhou City, halkaas oo caan ku tahay warshaddeeda & mashiinka mashiinka.
Waxaan diirada saareynaa soo saarida qeybaha waalka kubada, inta badan kubadaha waalka, waxaan heysanaa in kabadan 10 sano oo khibrad ah.
Sideed u sameysaa oraah?
Caadi ahaan, waxaan bixinnaa adeeg la habeeyay, sidaa darteed waxaan ku soo xiganaa sida ku cad sawirada macaamiisha, nooca cabbirka miisaanka dhumucda walxaha iyo qiimaha shaqada waa la tixgelin doonaa.
Macaamiisha aan lahayn sawirro u gaar ah, haddii ay oggolaadaan, waxaan isticmaali karnaa sawiradeenna.
Waxay kuxirantahay sheygaaga iyo tirada aad dalbatay.
Caadi ahaan, waxaan ku dhammeyn karnaa badeecadaha waaweyn 15 maalmood gudahood marka la helo helitaanka lacag-bixinta hore.
Waxaan ku siin doonaa talo soo jeedin wanaagsan oo loogu talagalay rarida alaabta iyadoo loo eegayo cabirka dalabka iyo cinwaanka keenista. Amar yar, Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaan ku rarno DHL, TNT ama xawaaraha kale ee raqiiska ah irrid ilaa albaab si aad alaabta u hesho dhaqso iyo badbaado. Amar weyn, waxaan ku rari karnaa badda, hawada, ama ku rarnaa xamuulka sida waafaqsan codsiyada macmiilka.
Sideed ku xaqiijin kartaa baaritaanka tayada?
Inta lagu guda jiro howsha dalbashada, waxaan leenahay heerka kormeerka kahor bixinta. Kahor intaadan xirxirin, waxaan haynaa koox koontaroola tayada si loo hubiyo wax soo saar kasta si loo hubiyo in mid kasta oo ka mid ah uu ku jiro tayo kaamil ah, waxaanna siin doonnaa sawirro cad oo dhab ah oo ka mid ah alaabooyinka badan ee la dhameystiray mid kasta oo ka mid ah macmiilkeena
Ma aqbali kartaa OEM ama ODM?
Haa dabcan. Astaan ​​ama naqshad kasta waa la aqbali karaa.
Wali jawaabta ma heli karaa?
Fadlan noo soo dir (info@future-ballvalve.com) si xor ah waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan kuu caawin karno una xallin karno dhibaatooyinka.